ရာသီခွင်ကြာသပတေးနေ့: ဘော့ Hickman အကြားအမြင်ရအလတ်စားနှင့်အတူ Gemini အတွက်အမှောင်မွန်း - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > ရာသီခွင်ကြာသပတေးနေ့: ဘော့ Hickman အကြားအမြင်ရအလတ်စားနှင့်အတူ Gemini အတွက်အမှောင်မွန်း
ရာသီခွင်ကြာသပတေးနေ့: ဘော့ Hickman အကြားအမြင်ရအလတ်စားနှင့်အတူ Gemini အတွက်အမှောင်မွန်း
Megan မေလ 25, 2017 ဗီဒီယိုများTagged ဗေဒင်ဆရာ, ချဉ်ကြော်, ဗေဒင်အတတ်ပညာ, Gemini, horoscope, horoscopes, အလယ်အလတ်, နတ်ကတော်, လအရိပ်လက္ခဏာ, ပလူတို, အဘိဥာဏ်, အကြားအမြင်, r ..., မြင့်တက်လာဆိုင်းဘုတ်များ, နေရောင်အရိပ်လက္ခဏာ, ရာသီခွင်7 မှတ်ချက် ဘော့ Hickman အကြားအမြင်ရအလတ်စားနှင့်အတူ Gemini အတွက်အမှောင်မွန်း: ရာသီခွင်ကြာသပတေးနေ့တွင်
Tubies ဟေ့! ယနေ့ငါရဲ့နက္ခတ်ဗေဒင်လေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့် Gemini အတွက်အမှောင်မွန်းကိုကြည့်သကဲ့သို့ငါ့ကို Join!
Witchy Stuff Cool ရယူပါ: http://rarewiccaspells.com/
Quinn Burpino says:
မေလ 25, 2017 မှာ 7: 10 ညနေ
Bob ကသငျသညျအစဉျအမွဲတော့ဘူးဗျာကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Howell မြင်သနည်း သူမကလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုတွေးမိ။
သိရန် Soooo ကောင်းသော။ စုံလင်သောလည်းအသိနှင့်ယနေ့ငါစုံတွဲတစ်တွဲတစ်ဦးချင်းစီထံမှလက်ခံရရှိထားသောစာပေးစာယူအချို့သို့အမြင်စေသည်။ LOL .. ပွေ့ဖက် Bestie) အို (
ကျီး Marie says:
မင်္ဂလာပါကျနော်အသစ်တစ်ခုကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူဖြစ်၏နဲ့ကျွန်မ MJ နှင့်သင်၏ Ouija ဘုတ်အဖွဲ့séanceကိုမြင်လျှင် ...
ငါသည်ဤဗီဒီယိုနှင့်အတူခေါင်းစဉ်ပယ်ဖြစ်ကောင်းသိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့အဖေ, Daren အညစျအကွေး၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူအတွင်းမငြိမ်မသက်အများကြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီ။ ငါသေနတ်မတော်တဆထိခိုက်မှုကနေ9ခဲ့သောအခါသူသေဆုံးသွားတယ်။ ငါသူ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ကြိုးစားလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါကဘုတ်အဖွဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအလွန် unexperienced ဖြစ်ကြောင်းကိုကြဘူး ...
သငျသညျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုသူ့ကိုဆက်သွယ်ပါကကူညီနိုင်မည်အားလုံးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့ပါလျှင်ငါအံ့သြခဲ့သလဲ မရှိနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ဆန္ဒရှိမထားဘူးဆိုရင်ကျနော်နားလည်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့ဤလုပ်ဖို့လိုသော်လည်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့လမ်းမရှိသောရှိသည် ...
ကျွန်မလက်ရှိ 17 ပေါ့, သူကစက်တင်ဘာလ၌လွန်ကတည်းကကြောင့် 8 နှစ်ပေါင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
လီစ Sixx says:
OH ။ MY ။ ကောင်းသောဘော့ !! ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေရုံ scrying ဘို့ဒီနေ့ငါ့ကိုကြည်လင်ဘောလုံးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်!
သငျသညျပေါ်မှာဗွီဒီယိုတစ်ခုလုပ်နိုင်လျှင်သင်တို့ကိုငါမမေးပဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည် & ဒီနေ့သင် scrying ဘို့အကောင်းတစ်နေ့ကိုဘယ်လိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ !!! ဝိုး!!
Angie: D says:
Tubies ဟေ့! ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗေဒင်စူးစမ်းလေ့လာကြပါစို့